Lily's eHyams :: Jervis Bay Rentals - I-Airbnb
Lily's eHyams :: Jervis Bay Rentals
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguJervis Bay Rentals
UJervis Bay Rentals yi-Superhost
Zonke iipropati ezilawulwa yi-Jervis Bay Rentals zigcinwe kakuhle, zigcinwe ngokufanelekileyo kwaye zicocwe ngokukhawuleza. Sikhetha kwiipropathi esizinikezeleyo ukuze siqinisekise ukuba amakhaya eholide asemgangathweni kuphela alawulwayo. Dibanisa oko kunye nenkonzo yexabiso lokuqala kwaye ukhuphe ukugembula ekukhetheni iholide yakho elandelayo yokurenta :)
Ngombono otshayelayo ngaphezulu kweJervis Bay kwaye ibekwe kufutshane nekona ukusuka kwi-Hyams Beach Cafe edumileyo, le duplex isandula kwakhiwe ilungile kwindawo yakho yokubalekela elwandle. Ifakwe kakuhle kwaye ilungele izibini ezi-2 okanye usapho oluncinci.
-Uhambo olufutshane: I-Hyams Beach, iCafe/indawo yokutyela, Ibala lokudlala laBantwana, i-White Sands engaselunxwemeni yomzila wokuhamba ematyholweni ukuya eVicentia, kwiPaki yeSizwe.
-Imibono: Iimbono zamanzi, iimbono zeBush
I-P R O P E R T Y
- Uyilo: I-duplex yamabali amabini aneendawo zokuhlala phezulu, kunye namagumbi okulala asezantsi kumanqanaba amabini ahlukeneyo
- Iindwendwe: Ubuninzi beendwendwe ezi-4 kunye neentsana ezikwibhedi
- Ikhitshi: Umatshini wokuhlamba izitya, uMshini weKofu, iToptop yoMbane, yanamhlanje, iSicwangciso esiVulekileyo, seLanga
-Igumbi lokuhlambela: Igumbi lokulala ngalinye line-ensuite, yangasese eyahlukileyo kwindawo yokuhlamba, akukho bhafu
-Ukufudumeza/ukupholisa: Indawo yomlilo yegesi, umjikelo wokubuyela umva umjikelo womoya okumgangatho ophezulu, iiFani kumagumbi okulala omabini, Ukufudumeza okuphantsi kumagumbi okuhlambela
- Ukupaka: Ikhabethe ephindwe kabini, Khusela isango lombane
-Ukufikelela: Indlela engumnqantsa kakhulu
-Ukhuseleko: I-intercom yevidiyo, iCCTV (iikhamera zangaphandle kuphela)
-Indawo yangaphandle: Iidekhi ezinembono yolwandle, i-BBQ enendawo yokutyela yangaphandle, ishawari yangaphandle
-Impahla: Umatshini wokuhlamba wangaphambili olayishwayo, Isomisi, umgca weeMpahla
- Izilwanyana zasekhaya: Akukho kuvunyelwe
B E D R O M S
- Ilinen: Iibhedi ziya kwenziwa kwaye iitawuli zaselwandle, iitawuli zokuhlambela, iimathi zokuhlambela, iitawuli zesandla kunye newasha zibonelelwa.
- Igumbi lokulala 1: Phezulu, ibhedi ye-Queen, ingubo eyakhelwe-ngaphakathi, i-en-suite
- Igumbi lokulala 2: Kumgangatho ongezantsi, ibhedi yenkosi, ingubo eyakhelwe-ngaphakathi, i-en-suite
4.94 · Izimvo eziyi-64
Le ndawo ibekwe kwindawo ezolileyo yedolophu. Nceda uhloniphe abamelwane.
Uya kuba kufutshane kakhulu nolwandle oludumileyo lwesanti emhlophe, ukuhambahamba etyholweni okumangalisayo, ikhefi ephilayo, ibha kunye nendawo yokutyela, idolphin kunye nokuhamba ngenqanawa ngomnenga, ukusefa, ukuloba, iiwineries nokunye okuninzi!
Umbuki zindwendwe ngu- Jervis Bay Rentals
Izimvo eziyi-1 786
IJervis Bay Rentals ilawula le ndawo intle egameni lomnini. Sifowuna kuphela kude.
Inombolo yomthetho: PID-STRA-17208
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$700
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Hyams Beach